Midowga Afrika oo soo dhoweeyey Raysalwasaare Farmaajo • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Federal Republic of Somalia / Midowga Afrika oo soo dhoweeyey Raysalwasaare Farmaajo
Tagged With: Farmaajo, Midowga Afrika
Midowga Afrika oo soo dhoweeyey Raysalwasaare Farmaajo
November 2, 2010 - By: Abdirahman. A
Ururka Midowga Afrika ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan Raysalwasaaraha cusub ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo dhowaan xilkiisa loo dhaariyey kadib markii ay ansixiyeen Baarlamaanka.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika oo maanta (talaado) soo saarey warsaxaafadeed ayaa sheegay in ay si buuxda u taageerayaan Raysalwasaare cusub iyadoo uu u direy hambalyo una rajeeyey inuu xilkiisa kasoo bixi doono.
Mr.John Ping ayaa sheegay inuu rajeynaayo xukuumada cusub ee lasoo dhisi doono ay noqon doonto mid gudata waajibaadka horyaala Dawladda Federaalka.
Gudoomiyaha Ururka Midowga Afrika ayaa xusay in Dawladda Federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed ay ka caawinayaan dadaalada lagu doonaayo in lagu demiyo colaada ka jirta Soomaaliya mudada gaaraya 20-sano.
Beesha Caalamka oo ay kamid tahay Qaramada Midoobay ayaa hore usoo dhoweeyey Raysalwasaare Farmaajo kuna booriyey inuu la yimaado waxqabad buuxda mudada yar ee u harsan Dawladda Federaalka.